ဝိုင်ခွက်လေး ကို ကိုင်ကာ မခို့တရို့ အပြုံးလေးတွေ နဲ့ ရှက်သွေးဖြာနေတဲ့ အလှမယ် “ရွှေအိမ်စည်” – Shwe Sar
ဝိုင်ခွက်လေး ကို ကိုင်ကာ မခို့တရို့ အပြုံးလေးတွေ နဲ့ ရှက်သွေးဖြာနေတဲ့ အလှမယ် “ရွှေအိမ်စည်”
ပရိသတ်ကြီးရေ မင်းသမီးချောလေး ရွှေအိမ်စည် ကတော့ အလှမယ် တစ်ယောက်အဖြစ် အနုပညာလောကထဲကို စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးအများအပြားမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေအိမ်စည်က လက်ရှိမှာဆိုရင် အောင်မြင်မှုတွေနဲ့အတူ ပရိသတ်တွေရဲ့မေတ္တာကို ခံယူထားတဲ့ ပြည်သူ ချစ်အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်နော်။
ရွှေအိမ်စည်က လတ်တလောမှာတော့ အနုပညာအလုပ်တွေ ကိုလည်း ဖြည်းဖြည်း မှန်မှန်လုပ်ဆောင်နေပြီး photo shooting တွေကို ရိုက်ကူးနေတာပါ။ ရွှေအိမ်စည်ကလူငယ်ပီပီ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုအပြည့်ထားရှိပြီး ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးကာ ကြိုးစားတဲ့သူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေအိမ်စည်ရဲ့ အလှအပတွေဟာ ဆိုရင်လည်း အလှမယ်တစ်ယောက်မှာ ရှိသင့်တဲ့ အဆင်းနဲ့အချင်း ပြည့်စုံတယ် ဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်နော်။
သူမရဲ့ အလှအပတွေကို ပရိသတ်တွေ ကို အမြဲ ချပြလေ့ ရှိတဲ့ အိမ်စည်ဟာဆိုရင် ယနေ့မှာ လည်း ပိုစ့်တစ်ခု တင်ပေးလာ ပြန်ပါတယ်။ ဒါကတော့ အိမ်စည်က ဝိုင်ခွက်လေးကို ကိုင်ကာ ” Haveaglass of wine with me? I’ll guarantee you all the fun ” ဆိုတဲ့ စာသားလေးအပြင် မခို့ တရို့ အပြုံးလေးတွေနဲ့ ရှက်သွေးဖြာနေတဲ့ ပုံအလန်းလေးတွေကို တင်ပေးလာတာကြောင့် ပြန်လည်ဝေမျှပေး လိုက်ပါတယ်နော်….။
Source & Photo credit – Shwe Eain Si’s Facebook Account
ပရိသတျကွီးရေ မငျးသမီးခြောလေး ရှအေိမျစညျ ကတော့ အလှမယျ တဈယောကျအဖွဈ အနုပညာလောကထဲကို စတငျဝငျရောကျလာခဲ့ပွီး နောကျပိုငျးမှာတော့ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးအမြားအပွားမှာ ပါဝငျသရုပျဆောငျလာတာဖွဈပါတယျ။ ရှအေိမျစညျက လကျရှိမှာဆိုရငျ အောငျမွငျမှုတှနေဲ့အတူ ပရိသတျတှရေဲ့မတ်ေတာကို ခံယူထားတဲ့ ပွညျသူ ခဈြအနုပညာရှငျ တဈယောကျဖွဈပါတယျနျော။
ရှအေိမျစညျက လတျတလောမှာတော့ အနုပညာအလုပျတှေ ကိုလညျး ဖွညျးဖွညျး မှနျမှနျလုပျဆောငျနပွေီး photo shooting တှကေို ရိုကျကူးနတောပါ။ ရှအေိမျစညျကလူငယျပီပီ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျယုံကွညျမှုအပွညျ့ထားရှိပွီး ကိုယျ့အားကိုယျကိုးကာ ကွိုးစားတဲ့သူတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ ရှအေိမျစညျရဲ့ အလှအပတှဟော ဆိုရငျလညျး အလှမယျတဈယောကျမှာ ရှိသငျ့တဲ့ အဆငျးနဲ့အခငျြး ပွညျ့စုံတယျ ဆိုတာ ထငျရှားပါတယျနျော။
သူမရဲ့ အလှအပတှကေို ပရိသတျတှေ ကို အမွဲ ခပြွလေ့ ရှိတဲ့ အိမျစညျဟာဆိုရငျ ယနမှေ့ာ လညျး ပိုဈ့တဈခု တငျပေးလာ ပွနျပါတယျ။ ဒါကတော့ အိမျစညျက ဝိုငျခှကျလေးကို ကိုငျကာ ” Haveaglass of wine with me? I’ll guarantee you all the fun ” ဆိုတဲ့ စာသားလေးအပွငျ မခို့ တရို့ အပွုံးလေးတှနေဲ့ ရှကျသှေးဖွာနတေဲ့ ပုံအလနျးလေးတှကေို တငျပေးလာတာကွောငျ့ ပွနျလညျဝမြှေပေး လိုကျပါတယျနျော….။
Previous post မိမိုက် လွန်းတဲ့ ဖက်ရှင်လေး နဲ့ ရင်ဖိုစရာ ကောင်းလွန်းနေတဲ့ “မေရတီဇော်”
Next post ဆွဲဆောင်မှု ရှိစွာ စက်ဘီးကို ကျွမ်းကျွမ်း ကျင်ကျင်စီး ပြလိုက်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် …